Orinasa fiara - mpanamboatra fiara any Sina, mpamatsy
Ity modely fiara mpamono rivotra ity dia mikarakara indrindra ny efitranon'ny fiara. Ilay ionic Air Purifier mahery dia afaka mamoaka iôgaly miiba 5,6 tapitrisa isaky ny cm3, izay afaka manala ny filaminana sy fofona ratsy avy ao anaty fiara avy hatrany. Ireo ion-tsinina avo lenta ihany koa dia mametaka vovoka, vovobony ary setroka mba hampitomboana ny kalitaon'ny rivotra sy hampihenana ny fofona sy ny fofona. Ny mpanadio rivotra dia mamoaka fofona ozone maivana izay mitovy fofona amin'ny orana fahavaratra. Ny ion ratsy izay mamoaka dia afaka manala ny fofona. Ny ozon dia mandaitra indrindra amin'ny fanadiovana rehefa ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra. Maimbo tsara ny fiaranao rehefa nanomboka ny fanadiovan-drivotra ny fiara.
Dual 2.1 A port USB dia omena amin'ny famoahana mahery vaika sy haingana ho an'ny telefaona finday, tablette ary fitaovana hafa. Fitaovana fiara tonga lafatra hitazonana ny kabine ao anaty fiara ho vaovao ary koa ny fanaovan-jiro haingana amin'ny fiara mandeha lavitra.
Izy io dia namboarina tsara, matte vy tsy misy fangarony miaraka amin'ny LED manga miloko kristaly, manampy endrika maoderina amin'ny atin'ny fiara-nao, manampy ny mpampiasa hahita ny fanadiovan-drivotra sy ny seranan-tsambo USB ao anaty haizina, ny hazavana manga malefaka koa nampitombo ny rivotra iainana ao amin'ny fiara. Ny singa dia ionizer mangina misy feo kely.
Fanadiovan-drivotra / Fiara / AP-C02
Ity modely fiara mpamono rivotra ity dia mikarakara indrindra ny efitranon'ny fiara. 5,6 tapitrisa pcs / iônegative ion izay mivoaka hanadio ny rivotra ao anaty fiara, ny 99% dia manala amin'ny fomba mahomby ireo potipotika, dia ho azo antoka fa dia mahafinaritra ianao. Fiampangana ho an'ny telefaona sy ny fitaovana hafa koa ny fanamorana ny dianao fiara. Ary ny endrika kanto sy jiro miasa manga dia mahafinaritra!
Io manadio rivotra modely io dia manadio tanteraka ny fahalotoan'ny rivotra. Izy io dia manivana amin'ny fomba mahomby ny sombintsombin'ny PM2.5, ny volo, ny vovobony, ny vovoka ary ireo zavatra hafa rehetra. Ny sosona karbaona mihetsika dia manala ny fofona sy ny olana manimba simika. Ary arahana 12 tapitrisa pcs / cm³negative ion mivoaka hamorona tontolo ala ao anaty fiaranao. Avelao ny fiara anaty, rivotra madio rehetra.
Jiro manga mahafatifaty, tara-pahazavana manga kely, tsy manjelanjelatra, mahazo aina ary tantaram-pitiavana kokoa. Tsy manadio rivotra fotsiny izy io. Manampia takelaka misy tsiro ihany koa mba hahatonga ny fiara hanitra hanitra tsara.
Fanadiovan-drivotra / Fiara / AP-C03
Ny endriny vita amin'ny firaka vita amin'ny alimina volondavenona mainty dia toa mahafinaritra. Ary ny maody haingam-pandeha 2 dia mampirehitra jiro malefaka roa, mamorona atmosfera rehefa maizina. Ary ny takelaka manitra dia hahatonga ny dia hahafinaritra kokoa.
Eo ambanin'ny fisehoana manintona, io fanadiovan-drivotra modely io dia manana asa fanadiovana matanjaka, mifantoka amin'ny fanamasinana fiara. Sivana ambaratonga 13 + karbaona mihetsiketsika + famoahana ion ratsy
Fanadiovan-drivotra / Fiara / AP-C05
Ity fanadiovan-drivotra fiara ity dia miaraka amin'ny fanadiovana 3 dingana, fanovana sivana maimaimpoana, karbaona mavitrika ary iôna miiba miiba. Izy io dia afaka manala amin'ny fomba mahomby ny 99% amin'ireo entona manimba eny amin'ny rivotra. Miaraka amin'ny fiasa aromatherapy dia hamorona efitrano manitra mahasalama ho an'ny fiaranao izy io.
Ny endrika kanto sy ny fitaovana tsara dia manome fahatsapana haitraitra, haingon-trano tsara koa.
Fanadiovan-drivotra / Fiara / AP-C06
Ity fanadiovan-drivotra tsara tarehy ity dia famolavolana ho an'ny fiara. Mety tsy fantatrao hoe ohatrinona ny loza mitatao ao anaty fiaranao, miaraka aminy no hodiovina tsara ny fiaranao, hiaro anao amin'ny tranga mety hanimba sy fofona ratsy.
Ity maodely ity miaraka amina rafitra marani-tsaina manara-maso ny rivotra, mampiasa sensor avo lenta, mandray ny fandotoana rivotra haingana sy an-tsaina. Ny kalitaon'ny rivotra misy ankehitriny dia aseho miaraka amin'ny tondro, rehefa avo ny haavon'ny fandotoana, mena ny jiro famantarana ny kalitaon'ny rivotra, misokatra ho azy ny vokatra avy hatrany ny herin'ny fanadiovana ambony indrindra amin'ny maody mandeha ho azy. Mampiseho maitso ny mazava rehefa tsara ny rivotra. Rehefa optimum ny rivotra dia manga ny mazava. Omeo anao ny dingan'ny fanadiovana hita maso.
Tsy manam-paharoa ny miasa, fihetsika tanana hanombohana, hijanonana ary hifehezana ny hafainganam-pandeha 2 haavo, izay mahatonga anao ho azo antoka rehefa mitondra fiara, tsy mila mahita ny bokotra fanaraha-maso.
Fanadiovan-drivotra / Fiara / AP-C07
Ity rivotra madio manadio ity amin'ny alàlan'ny sivana HEPA sy karbaona mavitrika, esory ny 99% amin'ny zavatra manimba sy ny gazy, mamorona efitrano azo antoka ho anao, ary arahana ionona miiba be mifoka avo lenta hanatsarana ny kalitaon'ny rivotra sy hampitombo ny fahafahan'ny hery fiarovan'ny vatana.
Mamandina ihany koa izy io, mahatonga anao hanana tontolo milay. Azonao atao ny mametraka azy ao anaty fiara na eo amin'ny birao, na aiza na aiza ilainao izany.
Fanadiovan-drivotra / Fiara / AP-C04
Ity manadio rivotra ity dia manadio tanteraka ny fahalotoan'ny rivotra amin'ny fanamasinana marobe. Izy io dia manivana amin'ny fomba mahomby ny sombintsombin'ny PM2.5, ny volo, ny vovobony, ny vovoka ary ireo zavatra hafa rehetra. Ny sosona karbaona mihetsika dia manala ny fofona sy ny olana manimba simika. Ary arahin'ireo pcs / cm 15 tapitrisa³famoahana ion ratsy hamorona tontolo iainana anaty fiara. Ny fanamasinana fiara iray manontolo dia manome anao tontolo ivoahan'ny fiara azo antoka sy mahasalama, avelao hankafizanao amin'ny dia mahasalama.
Jiro malefaka mahafinaritra sy fofona manitra. Mihoatra ny fanadiovan-drivotra izany.
Mitombo Ligh, Mamboly hazavana, Mitombo Lightin, Jiro zavamaniry, Mitombo ny avotra, Mamboly Lightin ny zavamaniry,